जसले लकडाउनभरि जनावरकाे भाेक मेटाइरहिन्
शिरिश मान महर्जन काठमाडाैं - शनिबार, असार १३, २०७७
तपाईलाई यो लकडाउनका बेलामा भोका जनावरलाई खाना खुवाउनुपर्छ भन्ने कुरा कसरी मनमा आयो? कुनै त्यस्तो घटनाले प्रेरित गर्‌याे कि?
म करिब ७ वर्षदेखि औपचारिक रूपमा यी आवाजविहीन पशुपन्छीहरूको हक, अधिकार र कल्याणका लागि कार्यरत छु। यसअर्थमा पनि स्वाभाविक रूपमा म उनीहरूका बारेमा सोच्ने गर्दछु। कोरोनाको महामारी विश्वभर फैलँदै छ भनेर थाहा पाउँदै गर्दा सबैभन्दा पहिले मैले यिनै जनावरहरूका बारेमा सोचेको थिएँ। किनकि कोरोना भाइरस जनावरबाट उत्पन्न भएको भनिएका कारण अब धेरै जनावर दुर्व्यवहारको सिकार हुनुपर्ला भन्ने मेरो पहिलो चिन्ता थियो। धन्न, यस सम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य संगठन बेलैमा बोल्यो र अनावश्यक भ्रम हटाउने काम भयो।
नेपालमा पनि हामीले मानिसहरूमा जनावरप्रति रहेको मनोवैज्ञानिक त्रास हटाउन विभिन्न प्रयासहरू गर्यों। नेपालमा लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगावै धेरै मानिस काठमाडौं बाहिर जान सुरु गरिसकेका थिए। पसल, होटल र व्यवसायहरू निकै कम मात्र चलेका कारण यी जनावरको खानाको स्रोत बन्द हुन लागेको पहिले नै महसुस गरेर लकडाउन हुनुभन्दा एक दिनअघि देखि नै मेरो संस्थाले जनावरलाई खाना खुवाउन सुरु गरेको हो। पशु कल्याणका लागि काम गर्ने भएकाले प्राकृतिक वा मानवनिर्मित जुनसुकै किसिमका विपत्तिहरूमा पनि यी आवाजविहीनको चिन्ता लागिरहन्छ। भोकले आकुल व्याकुल जनावरहरू बाटोमा खाना खोजिरहेको दृश्यले उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने भावना जागृत गराइदिन्छ। मेरो प्रेरणा भनेका यिनै जनावर हुन्।
ती खानाको म्यानेज कसरी गर्नुहुन्छ ? खर्च त हुन्छ होला ? कतिजति खर्च हुन्छ एक दिनमा ?
हामीसँग अहिले २०० भन्दा बढी जनावर (कुकुर, गाई, बाख्रा, सुँगुर) भैंसेपाटीस्थित सेल्टरमा रहेका छन्। तिनीहरूको पनि नियमित उपचार, खानपान र स्याहारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बिहान ६ बजेअगावै जनावरका लागि खानेकुरा पकाउने कार्य सुरु हुन्छ। हाम्रा केही कर्मचारीहरू लकडाउनका कारण उपत्यकाबाहिर नै रहेकाले कम जनशक्ति परिचालन गरेर धेरैभन्दा धेरै जनावरलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ।
सडकमा रहेका जनावरलाई खानेकुरा व्यवस्थापनका लागि खर्च त लागिहाल्छ नि। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा अहिले हामीले २५०० देखि ३००० जति जनावरलाई खानेकुरा खुवाइरहेका छौं। कुकुर, बाँदर, गाई तथा परेवालगायतका पशुपन्छीको खानाका लागि हाल दैनिक सरदर ५० हजार खर्च भइरहेको छ।
कति भोका जनावरलाई खाना खुवाउनुभयो यो लकडाउन अवधिभर?
दैनिक २५०० देखि ३००० जनावरलाई लकडाउनको अघिल्लो दिनदेखि नै खुवाइरहेका छौं। हामी पुग्न नसकेका केही स्थानहरूबाट यता पनि आइदिनुपर्यो भनेर अनुरोध आइरहन्छ। त्यस्ता स्थानहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेका छौं। त्यस्तै हामी गइराख्ने स्थानहरूमा पनि छुटेका केही ठाँउहरू छन् भने त्यस्ता ठाउँहरूलाई पनि समेट्ने गरेका छौं। यो लकडाउन कति दिनसम्म जान्छ अहिले भन्न सकिने कुरा भएन। हाम्रो कामको निरन्तरता हाम्रो एउटा चुनौती नै हो।
सडकमा भोका जनावरको समस्या कसरी भयो होला?
हामी सबैलाई विदितै छ कि सहरी इलाकामा रहेका सबैजसो जनावर मानिससँग आश्रित रहेका छन्। यो लकडाउनमा के पनि थाहा भयो भने यहाँ त काग, परेवाजस्ता पंक्षीहरू पनि झन्डै झन्डै मानिसहरूसँगै आश्रित रहेछन्। लकडाउनका कारण विशेषगरी होटल, रेस्टुराँ र मासु पसलहरू बन्द भइदिएपछि सामुदायिक कुकुरको आहारा नै समाप्त भयो। त्यस्तै धेरै मानिस उपत्यकाबाहिर गएका कारण घरबाट निस्किने फोहोरको उत्सर्जनमा कमी आयो। यस कारण पनि जनावरलाई खानेकुराको कमी भयो। मठ मन्दिरमा भक्तजनहरू आउन बन्द भएपछि बाँदर र परेवाहरू समस्यामा परेका हुन्।
लकडाउनका बेला यसरी सडकमा जनावरलाई खाना खुवाँउदै हिँड्दा के कस्ता समस्या छन्? प्रहरी, प्रशासन अनि आममानिसले कसरी लिएका छन्? सहयोग छ कि समस्या थपिदिएका छन्?
समस्याको त कुरै नगरौं। यतिबेला हामीले पशुपन्छी र हामीप्रति सद्भाव राख्ने व्यक्तिको कुरालाई ध्यान दिने हो। प्रहरी, प्रशासनबाट त्यस्तो असहयोग त भएको छैन, यद्यपि सुरुका दिनहरूमा सवारी पास लिन निकै सास्ती खेप्नुपर्यो। जनावरलाई खुवाउने कुरा वाहियात हो भनेर हाम्रो निवेदन नै च्यातेर पनि फालियो। जनस्तरबाट चाँहि त्यस्तो असहयोग केही भएको छैन। कुनै कुनै ठाउँमा तीनतला माथिबाट रोडमा खाना खान नदेउ हाम्रो घरमा झिँगा आँउछ, फोहोर हुन्छ भन्छन्। उहाँहरूलाई सम्झाइबुझाइ गर्ने गरेका छौं। हाम्रो कामलाई बुझ्नेहरू खुसी नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। सबैभन्दा खुसी त ती जनावरहरू छन्।
कसरी यो जनावर प्रेम जाग्यो तपाईभित्र?
वास्तवमा प्रेम मानिसको हृदयमा पहिले नै निहित हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो विभिन्न स्वरुपमा प्रस्तुत हुने र देखिने विषय हो। म पहिले जनावरप्रेमी थिइनँ। जब मेरो छिमेकीले मेरो घरको कुकुरलाई विष खुवाएर मारिदियो तब मलाई एक किसिमको रियलाइजेसन भयो। त्यही घटनाले आज म जनावरहरूलाई माया गर्ने भएको हुँ। अहिले यी प्राणीहरू नै मेरो संसार बनेका छन्। जति खुसी म उनीहरूलाई दिन सक्छु, त्योभन्दा धेरै खुसी उनीहरूले मलाई दिएका छन्।
अरु भन्नैपर्ने कुरा केही छन् कि?
मेरो एउटै मान्यता भनेको पशुहरूप्रति प्रेम र करुणा व्यक्त गर्नु नै सर्वोत्तम धर्म हो। हामी मानिसहरू बोल्न सक्छौं, भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्छौं, बिरामी पर्दा अस्पताल जान सक्छौं, आफ्नो हकअधिकारका लागि आवाज उठाउन सक्छौ। तर यी अबोध प्राणीहरूको सहारा भनेको हामी मानिसमात्र हौं। त्यसैले सकेसम्म पशुपन्छीहरूलाई सहयोग र माया गरौं।